सफलताका लागि छोड्नुस यी ५ कुरा - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सफलताका लागि छोड्नुस यी ५ कुरा
सफलता त्यसै आउँदैन्, त्यसका अथक मेहेनतका साथै सहित सहि दिेशा, स्पष्ट लक्ष्य र चुस्त रणनीति समेत तय गर्नु पर्दछ । जुनसुकै क्षेत्र नै किन नहोस, सफलताको लागि तपाईको व्यक्तिगत सोच, भोगाइ र बानी व्यवहारले उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ।
तपाईले आफैबाट शुद्धिकरण शुरु नगरेसम्म आफ्नो काममा यसलाई सफलतापुर्वक लागु गर्ने संभावना कमै हुन्छ।
सफलताका लागि धेरै राम्रा बानी ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ तर छोड्नु पर्ने कुरापनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छन्।
प्रस्तुत छ तपाईले छोड्ने पर्ने ५ किसिमका खराब बानी
१. सबैलाई खुसी पार्ने बानी
मानिसहरुलाई खुसि पार्नु राम्रो हो । सके त संसारका सबैलाई मानिसलाई खुसि पार्नु झनै राम्रो।तर व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट सबैलाई खुसि पार्ने सजिलो त के प्राय: असंभव छ।
त्यसैले सबैलाई खुसि पार्ने प्रयत्नमा धेरै गुमाउनु भन्दा सहि काम गरेर आफ्नै मनलाई खुसि पार्दा सफलताको बाटोमा एउटा इटा थपिन्छ।
२. परिवर्तनसंग डर
संसारमा सबैचीज परिवर्तनशील छ । केही कुरा पनि उस्तै रहँदैन् ।तर मानिसको स्वभाव भने परिवर्तनलई झट्ट स्विकार नगर्ने खालको हुन्छ । सफलता चाहने व्यक्तिले परिवर्तनसंग डराउने होइन आत्मसाथ गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्दछ।
३.वर्तमानमा बाँच्ने बानी
धेरै मानिस बिगतमा निक्लन सक्दैन र केहीले भुतकालबाट वर्तमानमा आउन र बाँच्न समय लगाउँछन्। व्यक्तिसंग वर्तमानमा जे छ त्यही सत्य हो, गइसकेको समय फेरी आउँदैन । वर्तमानमा जिउने मानिसले मात्र भविष्य राम्रो बनाउन सक्दछ।
वर्तमानलाई सर्वोपरी ठानेर जिउनेहरुले नै सफलता हासिल गर्दछन्।
४. आफै मात्र दोषी ठान्ने बानी
जीवनमा गल्ती हुन्छन् , जीवनमा असफलता पनि हात लाग्छन् । आफ्नो असफलताको जिम्मेवारी आफैले नै लिनु पर्छ तर सधै आफूलाई मात्र दोषि ठानेर आत्मग्लानीमा बाँचेर डिप्रेसन बाहेका हरु केही हासिल हुन्न। त्यसैले जीवनमा केही गर्ने हो दबेर होइन खुसीका साथ सफलता स्विकार गर्ने तर आफैलाई मात्र दोषी ठान्ने बानीबाट मुक्त हुनु पर्दछ।
५. चाहिने भन्दा बढि सोच्ने बानी
सोच्नु नराम्रो होइन् । सोच्नेहरुले सहि निर्णय लिन सक्दछन् । तर अचाक्ली सोच्ने बानीले भने डुबाउँछ। सही सोच्ने, चाहिने मात्रै सोच्ने र सोचका दायरमा नियन्त्रण अत्यन्त जरुरी छ।
Previousएटिएमबाट एक दिनमा ६० हजारभन्दा बढी निकाल्न नपाइने
Nextसुनको मूल्य तोलाको १४ सयले घट्यो